Opx2 Ukufakwa Kwe-Optic - Imagazini yoyilo
Ukufakwa Kwe-Optic I-Opx2 yifakelo ye-optic ejonga ubudlelwane be-typiotic phakathi kwendalo kunye netekhnoloji. Ubudlelwane apho iipateni, ukuphindaphinda, kunye nesingqisho ezichaza khona ukwenziwa kwendalo kunye nokusebenza kweenkqubo zekhompyuter. Ufakelo oluhlaziyiweyo lwejometri, opacity okomzuzwana kunye / okanye ukuxinana kuyafana nento yokuqhuba ngenqwelana yombona okanye ichazwe kwitekhnoloji ngelixa ujonge ikhowudi yokubini. I-Opx2 yakha iJometri entsonkothileyo kunye nemiceli mngeni ekuboneni umthamo kunye nesithuba.
Igama leprojekthi : Opx2, Igama labayili : Jonathon Anderson + Matthew Jones, Igama lomthengi : Jonathon Anderson Studio.
Yila intsomi yosuku
Abayili abaziintsingiselo kunye nemisebenzi yabo yokuwina.
Iintsingiselo zeeNqaku zeeNqaku bangabayili abadume ngokubalaseleyo nabenza umhlaba wethu ube yindawo engcono kunye noyilo lwabo oluhle. Fumanisa abayili abaziintsomi kunye noyilo lwemveliso abanayo, imisebenzi yoqobo yobugcisa, uyilo loyilo, uyilo olubalaseleyo lwefashoni kunye nobuchule bokuyila. Nandipha kwaye uphonononge imisebenzi yoyilo yokuqala yabayili bokuphumelela kwamabhaso, amagcisa, abayili bezinto ezimbi, abavelisi bobugcisa kunye neempawu kwihlabathi liphela. Fumana umoya ophefumlelweyo woyilo.
Ukufakwa Kwe-Optic Jonathon Anderson + Matthew Jones Opx2